Barreessaa keessatti, naannoo wantoota OLE, itti suuqii, safakawwan/taattootaa, saxaatoo, fi goodayyaawwanii handaaraa qindeessu nidandessa. Maqaan baafataa fayyadamatu wantaa filatame irratti hundaa'a.
Wantaafi handaaraa qindeessu barbaadu fili.
Sajoo Handaara irratti kamshaa Wanta - OLE ykn kamshaa Goodayya foddaa banuuf Handaarotaa cuqaasi.
Akkaataa handaara durmurtaawaa tokko cuqaasi. Kun akkaataa handaara wanta ammee
Man'eewwan gabatee warra fooyyeessu barbaaddu fili.
Dhangi'i - (maqaa wantaa) – Handaarawwan filadhu.
Gosa wanta filattee maqaa isa dhugaadhaan bakkabuusi (maqaa wantaa).
Naannoo Sarara keessaa, akkaataa handaaraa filatamaniif, akkaataa sarara ykn halluu fili. Ijaarsi kun sararoota handaaraa mara warra akkaataa handaaraa filataman keessatti dabalaamaniif fayyada.
Title is: Wantawwaniif, Handaaraalee Qindeessuu